Salohy Randriafanomezantsoa · Septambra 2020 · Global Voices teny Malagasy
Salohy Randriafanomezantsoa · Septambra, 2020
Lahatsoratra farany an'i Salohy Randriafanomezantsoa tamin'ny Septambra, 2020
Nahoana no manao fihetsiketsehana ny tanora any Thailandy ?
Mediam-bahoaka16 Septambra 2020
Manohy ny fikarakarana fihetsiketsehana goavana manerana ny firenena ny tanora mpikatroka Thailandey na dia eo aza ny fepetran'ny famerana. Fotoana voalohany manamarika firesahana ampahibemaso ny fanjakana Thailandey izany
Amerika Latina14 Septambra 2020
Niteraka ahiahy ny fihanaky ny gripan-kisoa izay nahafaty olona miisa 68 tao Mexico sy namparary olona 1.000 hafa. Nahatonga ny fanakatonana ny sekoly sy ny fanafoanana ny hetsika ara-kolontsaina ny valan'aretina. Nitandrina ny mponina eny an-dalambe tao an-drenivohitra mba hialana amin'ilay viriosy raha niandry hahita hoe ve miely ny aretina...
Vaovao farany Lingua volana May 2020
Mediam-bahoaka12 Septambra 2020
Manolotra ny vaovao Lingua volana Mey 2020 ny mpitantana ny Lingua
Amerika Latina06 Septambra 2020